I-Semalt ixwayisa mayelana nengozi yegama elingukhiye lokugxila
Izinjini zokucwaninga zigxeka ukugxila igama elingukhiye, futhi akuyona umkhuba wesigqoko esimhlophe se-SEO. Kwakukhona izikhathi lapho ukugxila kwegama elingukhiye kusebenza kahle ukubeka iwebhusayithi kuwebhu. Ngalezo zinsuku, izinjini zokusesha ikakhulukazi i-Google zingasebenzisa ngokushesha isimo sekhasi elinokugxila igama elingukhiye. Amasayithi ahlukaniswe ngenani elikhulu ngokusekelwe kungaki amagama angukhiye ayenawo. Ngisho noma amagama angukhiye ayengahlobene ne-niche yewebusayithi, ibuye iphinde iphumelele njengoba i-Google ithuthukisa ukusezingeni layo jikelele - ducray anaphase shampoo skroutz. Ngaleso sikhathi, ungase ufihle kalula amagama angukhiye angaphutha futhi angenangqondo ngaphakathi kwemibala efana noma imvelaphi emhlophe. Ngokwemvelo, kwaholela ekuhlangenwe nakho okubuhlungu komsebenzisi njengoba abantu abaningi bebengabheka amawebhusayithi ayevame ukuwavula phambi kwabo. I-Google nezinye izinjini zokusesha zaqala ukuhlunga amagama angukhiye afakwa kuwebhusayithi ngoba wonke lawa masayithi ayengenakho okuqukethwe okufundisayo neyomqondo.
Imiphumela yegama elingukhiye lokugxila nokuhle kakhulu kokusebenza:
uJulia Vashneva, iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu we Semalt i-Digital Agency, ixwayisa ukuthi ukugxilongwa kwegama elingukhiye manje kubhekwa njengesiqhwa se-Black SEO futhi kuvinjelwe ngokuphelele. Ngicela lapha ngitshele ukuthi kuzoba nezinzuzo ezimbalwa futhi isayithi lakho alikwazi ukujabulela impumelelo esikhathini eside run.Ukushesha noma kamuva i-Google izobe ihlawulisa iwebhusayithi yakho uma ibamba ukuthi ufaka amagama angukhiye. Kunamathuba ukuthi amakhasi akho azohlonywa kwi rankings noma asuswe ngokuphelele.
U-Matt Cutts, onguchwepheshe weGoogle, waxwayisa bonke abakwa-webmasters nama-bloggers mayelana nemikhuba ye-SEO emnyama, ikakhulukazi ukugxila kwegama elingukhiye nokuthuthukiswa ngaphezu kwezinyanga ezimbalwa ezedlule. Le nkampani izama ukudlala indima ebalulekile ekukhipheni nasekuqaliseni wonke amawebhusayithi okushiwo amagama angukhiye njalo. Ngisho nokusebenza ngokugcwele kunqatshelwe yi-Google, Bing, ne-Yahoo!
I-Google izama ukwenza i-Google Bot ibe mnandi kunangaphambili, futhi inkampani iphikisana nokwenza ngcono nokukhishwa kwegama elingukhiye. Ngakho-ke, akufanele usebenzise amagama angukhiye ahlukahlukene ekhasini elilodwa njengoba i-giant search engine izovimbela isayithi lakho impilo yonke. Ngamanye amazwi, singasho ukuthi i-Google ngeke ivumele igama elingukhiye ukugxila kunoma yiliphi izindleko futhi umdlalo oyingozi. Kungase kungakuholeli noma kuphi, futhi ibhizinisi lakho lizobhujiswa.
I-Google nezinye izinjini zokusesha azifani namasu we-SEO omnyama okwedlulele ikakhulukazi okugxilwe kuwo futhi afune ukuthi abaphathi bewebhu bangashayi iziqhinga zabo ngezinqubo ezinjalo zobuwula. Faka amagama angukhiye ngokuphepha kuzihloko zakho, futhi ukubaluleka kwegama elingukhiye kufanele kube phakathi kwamaphesenti amabili kuya kwanguhlanu. Esikhundleni sokusebenzisa amagama angukhiye afanayo isikhathi esiningi, kufanele usebenzise umsila omfushane omfishane namagama angukhiye omsila nemishwana kuzo zonke izihloko ukuze ubanike ukubukeka okumangalisayo nokubuchwepheshe. I-WordStream inikeza abathengi bayo eziningi ze-toolbar ze-SEO ezikusiza ukuthi udale umsila omfushane kanye namagama angukhiye omude nomsila futhi ugcine amarekhodi angaki amagama angukhiye owaye wasebenzisa ukushaya izinga elifunayo lokulinganisa. Omunye umqondo wukuthi usebenzise izivumelanisa nezinjini zokucinga ngeke zihlubule iwebhusayithi yakho.